Hosoka Ilay Sarin’ny Orita Goavana Hita Tany California · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2014 20:10 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Español, বাংলা, македонски, عربي, English
Sary niparitaka haingana tao amin'ny aterineto. Ny nahitana azy voalohany dia tao amin'ny lightlybraisedturnip.com tamin'ny 10 Janoary 2014. Sary ampiasaina araka ny fampahalalana tsotra.
Niely fatratra tamin'ny tambajotra sosialy nanavatsava fiteny maro ity sary sandoky ny orita goavana ity. Tamin'ny voalohany dia hita tao amin'ny Lightly Braised Turnip, izay fantatra ho tranonkalam-baovao mpananihany, ilay sary dia niaraka tamin'ny filazalazana fa “nahitana orita goavana tao amin'ny morontsirak'i California ary mampiahiahy ny manampahaizana ho vokatry ny taratra no nahalasa goavana dia goavana azy“, ary niampanga ny voinan'ny toby nokleary tao Fukushima ho antony nahatonga ny fisian'ny zavamananaina an-dranomasina ho bevata tafahoatra.
Ny Orita Goavana (karazana: Architeuthis) dia orita monina any amin'ny fanambany lalina amin'ny ranomasina izay mety hitombo hatramin'ny 13 metatra ara-boajanahary. Mailo tamin'ilay sary ny bilaogera Japoney Piyohiko, nanao famotorana [ja] ilay sary tamin'ny aterineto ary nahatratra izany haingana.
Nikaroka ny sarin'ny “a giant squid” [orita goavana] tao amin'ny Google izy ary nahita ny sary niavian'ilay orita goavana:
Saripikan'ny orita goavana iray nivoaka tao amin'ny Xinhua News. Ny sary dia nopihan'i Enrique Talledo [es], izay manoka-tena ho amin'ny firaketan-tahiry ny riaka (ranomasimbe)
Folo segondra monja ny laniko nahitana azy!!
Misy itovizana be dia be ny sary amiko, sa tsy izany ve?
Nanamarika ihany koa ny mpaka sary Masahiro Ariga [ja] fa hosoka ny sary. Nanamarika izy fa mifanandrify indrindra tamin'ny sary eto ambany ity, izay nivoaka tao amin'ny 4thmedia.org tamin'ny 2011, ireo nanatrika ilay orita goavana, :
Saripika tamin'ny 3 Novambra 2011, izay nivoaka tao amin'ny tatitry ny 4thmedia.org nahitana trozona maty tany Chile.
Ariga naneho ny heviny [ja] tamin'ny halakin'ny fielezan'ilay sary hosoka tao amin'ny Facebook:
Tena nahatalanjona tokoany halakin'ny sary [orita goavana nihitsoka teo amin'ny morontsirak'i Santa Monica]. Raha vaonahita ny vaovao an-tserasera aho tamin'ny mitataovovonan'ny 9 Janoary, dia mbola 13000 ny nanao tia Facebook azy. Saingy, nandritra ny alina, dia nahatratra 20000 ny isan'ny tia. Tahaka ny hoe maro dia maro ny olona nino ny vaovaon'ilay orita nihangeza tafahoatra noho ny taratra ary lasa be ahiahy.
Tsy mazava raha kivazivazy ihany na fikasan-dratsy ny antony namoronana ity vaovao namboarina ity, saingy maro ny olona no manaiky ilay vaovao ho marina. Eo am-pijerena ny fiakaran'ny lainga sy ny fiahiahiana ato amin'ny aterineto manerana ny tany aho.